जे माग्यो त्यही वर पूरा हुने दैलेखको सबैभन्दा अग्लो स्थानमा रहेको महावु धामको दर्शन गर्नुस् ! यस्तो छ महिमा - News Online Nepal
मुख्य पृष्ठ /News/जे माग्यो त्यही वर पूरा हुने दैलेखको सबैभन्दा अग्लो स्थानमा रहेको महावु धामको दर्शन गर्नुस् ! यस्तो छ महिमा
कर्णाली प्रदेशअन्‍तर्गत दैलेख र कालीकोट जिल्लाको सिमानामा पर्ने महावु धाम विश्वका धेरै मानिसको आस्थाको धरोहर हो । यो दैलेखको सबैभन्दा अग्लो स्थानमा पर्ने एक धार्मीक पर्यटकीय क्षेत्रका रुपमा परिचित पर्यटकीय स्थल हो। उत्त स्थानमा प्रत्येक वर्ष जनै पुर्णीमाको अघिल्लो दिनदेखि तिन दिनसम्म भव्य धार्मीक मेला लाग्ने गर्दछ।
कर्णाली प्रदेश पर्यटन वन तथा बातावरण मन्त्रालय अन्र्तरगत डिभिजन बन कार्यालय दैलेखले २ किलोमिटर पदमार्ग र ७ सय ७७ वटा सिडी निर्माण गरेको हो। उक्त पदमार्गका निर्माणकालागि डिभिजन वन कार्यालय दैलेख र उपभोक्ता समितिको श्रमदान सहित २३ लाख १० हजार ३ सयमा पदमार्ग निर्माण सम्पन्न भएको छ । जनबोलीडटकमबाट